Kooxda Barcelona oo halgan dheer kaddib hanatay koobka UEFA Super Cup + Sawirro. – Cayaaraha dunida
Kooxda Barcelona oo halgan dheer kaddib hanatay koobka UEFA Super Cup + Sawirro.
Kooxaha Barcelona iyo Sevilla ayaa xalay waxaa dhex martay ciiyaartii ugu xiisaha badneyd muddo dhowr bilood ah, kaddib markii labada kooxoodba ay barbaro ku dhameysteen xilligii loogu talo galay ciyaarta 4-4 barbar dhac ah.
Labada kooxood ayaa mudadii ay ciyaartu socotay marka Barcelona gool dhaliso, waxaa hadana iska soo gudayay kooxda Sevilla, iyadoo laacibka Messi xalay u yaabay xirfadiisii kubadda cagta kaddib markii uu la kulmay iska caabin xoogan.
Taageerayaasha labada koox oo soo buux dhaafiyay ayaan iyagu salka dhulka dhigin, iyagoona rajo weyn ka qaba in kooxdooda guusha la caraabeyso koobka horyaalka UEFA Super Cup-ka miiska saaran.
Markii ay dhammaatay 90-kii daqiiqo ee ciyaarta, ayaa waxaa lagu daray daqiiqado dheeraad ah oo labada markaan ay ku kala baxayaan gool ku laad, iyadoo daqiiqadii 93-aad laacibka Barcelona ka tirsan Manchester United uu dhaliyay goolkii guusha, waxayna ciyaarta ku dhammaatay 5-4-gool oo guusha ay la hoyatay Barcelona halgan adag kaddib.
Dhinaca kale markii lagu dhawaaqay guusha kooxda Barcelona waxaa garoonka qarqiyay taageerayaasha kooxda iyo ciyaartoyda, iyadoo koobka la guddoonsiiyay Pedro oo isagu xalay guul darro ka badbaadiyay kooxda, waxaana garoonka ka dhacay fantasiyo lala yaabay iyo damaashaad socday muddo dhowr saacadood ah.